Soomaalida Norway oo lagu eedeeyay dambiilenimo | Somaliska
Soomaalida Norway oo lagu eedeeyay dambiilenimo
Warbixin ay soo saartay Laanta tiro goobta Norway Statistisk sentralbyrå (SSB) ayaa lagu sheegay in Soomaalida wadankaas ku nool ay yihiin kuwa ugu badan bulsho ahaan ee dambiyada geysa. Soomaalida ayaa la sheegay in ay u badanyihiin dambiyada gacan ka hadalka iyo daroogada.
Warbixintaan oo lagu faahfaahiyay dambiyada ka dhaca guud ahaan dalka Norway, ayaa lagu sheegay in 85% dambiyada wadankaas ka dhaca ay geystaan dadka Norwejiyanka dhaladka ah balse inta soo harday ay geystaan soo galootiga. Waloow uu aad u hooseeyo nambarka dambiyada ay geystaan soo galootiga ayaa la sheegay kuwa ugu badan ee dambiyada ka gaysta wadankaas in ay yihiin Soomaalida, Ciraaqida iyo Bosnia.
Somaalida ayaa qaasatan la sheegay in koox ahaan markii tiradooda la eego ay yihiin kuwa ugu dambiyada badan soo galootiga. Markii la sii kala saaro Soomaalida ayaa warbixinta lagu sheegay in dhalinyarada ku dhalatay Norway ay yihiin kuwa gaysta dambiyada ugu badan.
Soo galootiga ugu dambiyada yar ayaa lagu sheegay dadka indho yarta ah sida kuwa ka soo jeeda Shiinaha iyo Filipin.